‘माथि'बाट फोन आएको आयै गर्छ, खाँदबारीमा आज रमिता छ
पुसतन्त्र–२ को रचना नहुँदासम्म राजनीति एकसुरे बाजाजस्तो थियो । बालुवाटारको खोपीमा दिनका दिन बेकारका बैठक, सत्ता आलोपालोको मीठो सम्झना, अनि आलोचना–आत्मालोचनाका सुगारटानलाई समाचार मान्न छाड्ने हो भने शीर्ष नेताहरू आराम–मनोरन्जन गरिरहेका थिए ।
काम नपाएर कार्यकर्ताहरूको बजारभाउ घटेको थियो । जता हेरे पनि नेताहरू फालाफाल छन्, संगठनचैँ मरेतुल्य छ । विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘महान् एकता’पछिका अढाई वर्ष तिनले हाई काढ्दै, हावामा हात हल्लाएरै बिताए ।
पुरानो पुस १७ सम्झाउने गरी जब केपी ओली नयाँ पुस ५ रच्न अघि सरे, नेकपाको शान्त तलाउमा पानी चल्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक संसद विघटनपछि ‘शीर्ष एक–दुई–तीन–चार–पाँच’ हरूलाई फुर्सद छैन । मन्त्रीहरू मन्त्रालयबाहेक सबैतिर पुगिरहेका छन् ।
देशैभरिका कार्यकर्ताहरूले अकस्मात् भाउ पाइरहेका छन् । खाँदबारीमा आज रमिता छ । ‘माथिबाट’ फोन आएको आयै गर्छ । अस्तिसम्म उपल्लाहरूको स्वास्थ्य सोधिन्थ्यो, अब ‘तल्ला’ हरूको सोधिन्छ । विरक्त बाबुआमाको उपचार गराइदिनेदेखि श्रीमतीलाई इजरायल पठाइदिनेसम्मका बाचाहरू संखुवासभाका बस्तीहरूमा सुन्न पाइन्छ ।
कांग्रेसको प्रदर्शनमा आएका महिलाहरू ।
नेकपाका कमरेडहरूको यो हाँपदाँप किन हो, प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि कम छैन । वैशाखमा नहुने चुनावका लागि ऊ मज्जैले कस्सिएको छ । नेताहरू ‘जय नेपाल’ भन्न तुम्लिङटार एयरपोर्ट ओर्लिन थालेका छन् । कार्यकर्ताहरूलाई आमसभामा आउन बसभाडा र चियाखाजा मिल्न थालेको छ ।
अघिल्लो साता पूर्वी पहाडको यो सुन्दर जिल्लामा यस्तै चित्रहरू देखिए । कांग्रेस मोटरसाइकल जुलुसमा थियो, कम्युनिस्टहरू आ–आफ्नै भेलामा । पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तारामान गुरुङ कांग्रेस कार्यालयअघि मन्तव्य दिन घाँटी साफ गर्दै थिए । ‘ओलीको कदम गलत हो, कांग्रेस चुनावबाट भाग्न मिल्दैन’, आवाज तिनको, बोली शेरबहादुर देउवाको, ताली कार्यकर्ताको ।
खाँदबारी कांग्रेससभामा पूर्वमन्त्री तारामान गुरुङ ।
नेकपाको माधव–प्रचण्ड समूहलाई एकीकृत गर्न विद्यार्थी नेता रञ्जित तामाङ, आरती लामाहरू त्यसैको छेउमा अर्को सभा गर्दै थिए । तिनको जुक्ति थियो, राजनीतिक सुझबुझ बढी भएकालाई पार्टी र भ्रातृ संगठनमा राखिहाल्ने, बाँकीलाई संघर्ष समिति बनाएर आफ्नोतर्फ ‘इन्गेज’ गरिराख्ने । उनीहरू त्यसको भोलिपल्ट बयलगाडा बनाएर ओलीलाई व्यंग्य गर्ने ताकमा थिए । ‘ओलीको कालो हुँदै गएको जुँगा झर्नेगरी प्रतिरोध गर्ने, तिनलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउने’, तामाङको विद्यार्थी बोलीमा स्वभावतः आक्रोश थियो ।
ओली समूहले केही दिनअघि संखुवासभा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला गराएको थियो । एकाघरका सदस्यहरू पनि अरुण नदी वारिपारि भएका थिए । ‘पार्टी फुट्दा नमज्जै भयो, अस्तिसम्म राम्ररी बोल्ने साथीहरू फेसबुकमा ब्लक हान्न थाले’, खाँदबारीका युवा कार्यकर्ता शुक्र लिम्बूले दुखेसो पोखे ।
चैनपुरतिर होस् या मानेभन्ज्याङतिर–पूर्वी पहाडमा राजनीतिको बहस गर्मिएको छ । खाँदबारीका दृश्यहरू भन्छन् : आपसमा विभाजित नेता कार्यकर्ताहरू कोभिडकालको भौतिक दूरीको मतलब नगरी दलीय दूरी घटाउन लागेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहको युवा–विद्यार्थी भेलामा सहभागी युवतीहरू
घरैपिच्छे मानिसहरू कुनै न कुनै पार्टीमा खुल्न थालेका छन् । अनधिकृत संसद विघटनमार्फत सुरु राजनीतिक अपराधलाई चुच्चे नक्साको पाल्सी बर्कोले छोपिएको छ । नागरिक बन्न नसकेका गाउँका ‘राजनीतिक उपभोक्ताहरू’ लाई सम्भावित अवसरको आस या मुखैमा आएको मौका गुम्न सक्ने त्रास देखाएर अस्तित्व लुट्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रमा जनता जागेको राम्रो । दलतन्त्रको दलदलले गाँजेको नराम्रो ।
तुम्लिङटारमा तरूण दलको मोटरसाइकल र्‍याली ।
किमाथाङ्का जाने बाटोमा स्थानीयसँग कुरा गर्दा जे पाइयो, सम्भवतः त्यो आजको आम नेपाली धारणा हुन सक्छ ।
–एक, सबै मिलेर केपी ओलीलाई नेता माने, तर उनले आफूलाई मात्रै हेरे । (बालकुमारी गुरुङ, चिचिला गाउँपालिकाबाट खाँदबारी आएकी सडक मजदुर । उनी अखिल नेपाल ट्रेड युनियनमा सदस्य छिन्)
– दुई, अझै पनि हामीलाई ओली विकास गर्न चाहने नेता हुन् भन्ने नै छ । तर त्यो उनको काममा देखिएको छैन । (रुद्रमाया कार्की, सडक मजदुर, चिचिला गाउँपालिका)
– तीन, ओलीले गल्ती गरे भन्ने सुनेका छौँ, तर त्यो गल्ती के हो भन्ने थाहा छैन । (विमला सुब्बा, रुद्रमाया र बालकुमारीसँगै आएकी सडक मजदुर)
– चार, राजनीति हो कि रमित, बुझिसक्नु छैन ।
कम्निस्टहरू आपसमा मिल्नै सक्दैनन् भन्ने देखियो । (चैनपुर– १० खराङका गणेशबहादुर भण्डारी)
– पाँच, यो लफडा सबै भारतले गराएको अरे । अब चीन पनि आउँदै छ अरे । (मानेभन्ज्याङमा भेटिएका एक व्यवसायी)
– छ, हामी खासमा आज शपथ ग्रहणका लागि भनेर आएका थियौँ । तर, यहाँ आएपछि थाहा भयो, हामी पार्टीको विरोधी समूहलाई परास्त गर्न ल्याइएका रहेछौँ । (अनेरास्ववियु चैनपुर क्याम्पस कमिटीकी सदस्य टीकालक्ष्मी कार्की)
‘अरे’ का कुरा नगरे नै बेस । तर, जुन देशमा ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ व्याप्त छ, त्यहाँ स्वयम् नेताहरू आफ्ना कर्तुत लुकाउन एकअर्कालाई अराष्ट्रिय तत्त्व करार गर्दै रहन्छन् । यस्तोमा हावा–हल्लाहरू सुन्नु त परिहाल्छ ।
नेकपाको कार्यक्रममा आएका मजदुर महिलाहरू ।
सदरमुकाम खाँदबारीमा भेटिएकी शान्तिला चौहानदेखि बरुण क्याम्पसकी संगीता तामाङसम्मको बुझाइ, अनि माथिका टिप्पणीहरू सुन्दा नागरिकको देश–चिन्तनबारे एकसरो लख काट्न सकिन्छ ।
मैले सोधेँ, ‘ओलीले संविधान मिचेर संसद भंग गरे भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा छ ?’
रुद्रमाया बोलिन्, ‘अहँ मलाई त थाहा छैन । तर, मलाई एउटा कुरो थाहा छ– ओलीले कुनै पनि काम गर्दा पार्टीमा सल्लाह गर्दैनन् ।’
‘ओली राष्ट्रवादी छन्, प्रचण्ड र माधव नेपाल राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने हल्ला छ । तपाईंहरूलाई त्यस्तो लाग्छ ?’
उनीहरूले यो कुरा मानेनन् । निर्मला लिम्बूले भनिन्, ‘नेताहरू कोही चोखो छैन होला कि । तर, सुनेको सप्पै कुरामा ‘हो–हो’ भन्दै हिँन्नु त भएन ।’
जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र गौतम ओली पक्षमा खुलिसकेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौंको निर्देशनमा दुवै कित्ताका कमरेडहरू अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै छन् । र, यहाँको संघीयता जनवादी केन्द्रीयताअन्तर्गत चलिरहेको छ ।
स्थानीय पत्रकार विजय कार्कीका अनुसार साबिक एकीकृत पार्टीको जिल्ला कमिटीका १४७ मध्ये ओलीको पक्षमा ४२ मात्रै छन् । बाँकी १०५ जिल्ला सदस्य ओलीविरोधी कित्तामा खुलिसकेका छन् । आन्तरिक संगठनमा माधव–प्रचण्ड पक्षको पकड देखिन्छ ।
तर, कथं चुनावी लहर आएमा के हुन्छ भन्न नसकिने सुनाउँछन्, माधव–प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ता अमेरिकन भोटे । असंवैधानिक बाटोबाट ओलीले चुनाव गराउन लागेको भन्दै यसको विरोध गरिने उनले जिकिर गरे । केन्द्रमा पार्टीको औपचारिक फुट घोषणा नभए पनि भावनामा पार्टी टुक्रिसकेको, अब यो जोडिन सम्भव नरहेको उनले बताए ।
‘हामी पार्टीको पकड बलियो बनाउन लागेका छौँ, एक किसिमले अहिले हाम्रो तयारी भनेको संघर्षसँगै आउने चुनावका लागि हो’, अमेरिकन भोटेले बताए ।
स्थानीय कार्यकर्ताहरूको मुड हेर्दा बुझ्न सकिन्छ- पार्टीमा हुने विगतका फुटहरूले दिएको पीडाको सम्झना यहाँ आलो छ । कार्यकर्तामा उछलकुद छ, तर चेहरामा दल विभाजनको हीनताबोध, अनि त्यसले बाँडेको समानुपातिक उदासी छुपेको छ ।
म फेरि एक पटक गणेशबहादुर भण्डारीकहाँ पुगेँ । खाँदबारी नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा उनको फुर्तीफार्ती हेर्न लायक थियो ।
‘संसद विघटन गर्न पाउनु त प्रधानमन्त्रीको हकै हो नि, होइन र दाजु ? यता पहाडतिर मान्छे के भन्छन् ?’
‘पोल्टिक्स कुबाटामा हिन्दै छ भनी जान्नलाई ठूल्ठूला क्याम्पस गइराख्नुपर्छ र ? म त यहाँ गाउँकाहरूलाई ओलीले छँदाखाँदाको संसद मासेर बेठीक गरे भनेर बुझाउन लागिपर्‍या छु’, खराङका यी खरा भण्डारी अब भने बिच्किए, ‘भाइले मन चोर्न खोज्नु भो भन्दैमा कसरी ‘ठीक’ भन्दिन सक्छु ?’
‘अरुको कुरो पनि लगभग यस्तै हो । नपत्याए सोधिहेर्नू’, तिनले आफ्नो तर्कलाई आधिकारिक बनाउन खोजे । अनि ज्याकेटको खल्तीबाट लाइटर निकालेर सिगरेट सल्काए ।
(तस्वीरहरूः बसन्त बस्नेत)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १, २०७७, ११:३४:००